အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ၈၈၈၈ ရုံး ခန်းမှာညစာစား ခဲ.သော ကြောင်စုန်းကြီးများ၊ (သို.) နောက်ဖေး အိမ်မလွယ်ပေါက် မှ လာသောဧည်.သည်များ။
၈၈၈၈ ရုံး ခန်းမှာညစာစား ခဲ.သော ကြောင်စုန်းကြီးများ၊ (သို.) နောက်ဖေး အိမ်မလွယ်ပေါက် မှ လာသောဧည်.သည်များ။
မြန်မာတွေ လိုက်လျှောသည်းခံ အားနာတတ်တဲ.စိတ်က ကမ္ဘာကျော်သည်။ နိုင်ငံများစွာကို သွားနိုင်အောင် ချိတ်ဆက်ထားသော ခရီးရှည် ရထား များ ကို အစုန်အဆန်စီးပြီး ခရိးသွား ရထားဆောင်းပါးများဖြင်. ကမ္ဘာကျော်ခဲ.သော ပေါလ် သရိုးက သူရောက်ဖူးသမျှ နိုင်ငံတွေအားလုံးထဲမှာ မြန်မာပြည်က လူတွေ လောက် ဒုက္ခကို ခါးစည်း ခံ နိုင်တဲ.လူမျိုး မတွေ.ဖူးသေးဟု ပြောဖူးသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ရထားအကြောင်းမဟုတ်။ ရထားတွေစီးရင်း ဘ၀တက္ကသိုလ်ခရီးသွားတဦးဖြစ်လေသည်. ပေါလ်သရိုး အကြောင်းမဟုတ်။ မြန်မာပြည်က ရထားဝန်ကြီးနှင်. အခါခါလက်ဝါးရိုက်ပြီး ပြည်တွင်းပြန်ရောက်နေသော ကြောင်စုန်းကြီးအချို.က၊ သူတို.နှင်. လားလားမဆိုင်သော ၈၈၈၈ ရုံးခန်းကို အိမ်နောက်ပေါက်က၀င်ကာ တိုင်းပြည်နှင်. အတိုက်အခံ လောက ကို ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေဖြင်. အကွက်ချ ဆက်ဖျက်ဆီးမည်. လူ.ကပ်ပါး ဖေါက်ပြန်ရေးသမားများတို. အကြောင်းဖြစ်သည်။
ကိုမိုးသီး၏ ဆန်ဇေးရှင်းနယ် အချိန် ဆိုက်ရောက်ခြင်း Sensational Week
သူကတော.အများသိပြီးဖြစ်တဲ.အတိုင်းပွဲဆူစေသည်။ ဆန်ဇေးရှင်းနယ်ဖြစ်စေအောင် နေတတ် ထိုင်တတ် ပြောတတ်ပါသည်။ သူအနေအထိုင်မတတ်၍ ၈၈၈၈ သမိုင်းနှင်.ဝေးသောသူများကပင် သတင်းစောင်ရေများအောင်၊ သူ လက်လှုပ်ခြေလှုပ်လေးတွေကအစ တခုတ်တရ ဆောင်းပါးရေးကြသည်။ ( တခါမှ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမဝေဖန်ဖူးသော သူုတွေကပါ ဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းကြသည်)
လေသာပြူတင်းမှာ ရပ်၍ မိန်.ခွန်းလည်းချွေတတ်သည်။ လူတွေက သူ. အကြောင်း လိုက်ကြရေးကြသည်။ ဒီိတော. နိုင်အောင် ၊သောင်းထွန်း၊ဇော်ဦး အညစ်ပတ်ဆုံး ခြေကြီးလက်ကြီးများက ပျောက်နေသည်။
ပိုပြီးညစ်ပတ်လေသည်. လေဘာပြည်သစ်ညွန်.ဝေ (၀ါ) မောင်မောင်ကြီးကလည်း ခပ်ကုတ်ကုတ်နဲ. ဒီနေ. ရောက်လာသည်။ မိချောင်းမျက်ရည်လား ဘာလား တစနှစ်စ သောမျက်ရေ သူ.မျက်ဝန်းမှာတွေ.လိုက်ပါသေးရဲ.။ အို--၀ိုင်းတော်သားတို.စုံကြပြီ။ သူတို. ကလဲခေသူတွေမဟုတ်။ ၀ူးဝူးဝါးဝါး အော်ဆဲချင်သူတွေ၊ ဥာဏ်နိမ်.သောသူတွေကို မိုးသီးနှင်.လွှတ်ပေးထားပြီး သူတို.က သီးသန်. ကြံ နေကြသည်။ မီဒီယာကလည်း နိုင်အောင်ကို သက်သာစေသည် မို.နဲနဲတော.အံ.သြမိသည်။ သတင်းထောက်ဆိုတာ လူတကာသိပြီးသား တွေကို စာစီပေဖွဲ.နေမဲ.အစား၊ အဖုံးအုပ်ထားတဲ. အိုးထဲက အရာတွေကိုသာ လူတွေတွေးမိအောင် စဉ်းစားမိအောင်ရေးပြသင်.သည်ဟုယူဆထားပါသည်။ ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ ပရိတ်သတ်မရှိသူတို.ကသူတို. ခြေရွှေ.ကွက်တွေကို အထူးညက်ညော စွာဆင်ထားနိုင်ကြသည်။ အချောင်သမားတစုက ၈၈၈၈အားလုံးကို တလွှာစီ တစစီ ဖျက်စီးဖို. အိမ်နောက်ဖေး မှာ ဈေးဆိုင်တည်လေမည်. အကြံကြီး ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်အစစ်ကို ပြည်သူတွေကို ပြောမှ ဖြစ်မည်ဟုယူဆသောကြောင်. ဒီစာရေးဖြစ်သည်။
အိမ်နောက်ဖေးမှာ ဈေးဆိုင်တည်၊ ကြောင်စုန်းကြီးတို. ခြေဖျောက်ဝင်၊
အေဘီ မြောက်ပိုင်းစခန်း လူသတ်မှု များအကြောင်း စုံလင်စွာ ထွက်လာ သည်. အချိန်က စလျှင် ခု ၉လနီးပါးရှိပြီ။ လူသတ်သမားတွေ၏လက်တွေခြေတွေကို ခိုင်ခိုင်တုပ်နိုင်သော အခြေအနေ သည် ရာသီရောက်၍ ပေါ်လာသည်. အခွင်.အရေးမဟုတ်။ ရာဇ၀တ်မှုကြီးများကို စိမ်ပြေနပြေ ကျူးလွန်ထားပြီးလျှင်၊ ရာဇ၀တ် မှုမြောက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီး၊ ရင်မဆိုင်လိုသော ရာဇ၀တ်သား က တွန်.ဆုတ် ရှောင်ပြေး၊ ပတ်လည်ပြေး တပြေးထဲပြေးနေရသရွေ. မှန်ကန်သောသူတွေ ဖက်က စိတ်ဓါတ်အရနိုင်ပြီးသားဖြစ်သည်ဟုတွက်လို.ရသည်။ သို.သော်- ရာဖ၀တ်သားက သူဆက်ပြေးလို.မရတော. ဘူးလို. သိသွားလျှင်၊ ၊ လိုက်သောသူတွေဖက် ကလည်း မြေခွေးလိုက်ပွဲကို မရပ်သေးဖူးဆို လျင်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံရမဲ. အချိန် တခုမကြာခင်ကြုံ၇တော.မည်ဟုထင်မိသည်။ ဤအချိန်နေရာ ကိုရောက်လျှင် သစ္စာ သမားတွေ ကို တနည်းနည်းဖြင်. တရားစောင်.သောနတ်က ကူညီလိမ်.မည် ယုံဆဲဖြစ်သည်။
သူတို.ကို မရသေးတာက အချိန်မသင်.သေးတဲ. အပိုင်း ကတပိုင်း ၊ သူတို.မှာအကာအကွယ်တခုခု ရထားလေသလားဆိုတဲ. အပိုင်းကတပိုင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြောင်းမရတဲ. ခိုင်မြဲနေမဲ. အမှန်တရားကို အခွင်.အရေး အခွင်.အလန်းလို. မြင်လို.မဖြစ်။ ခု အခွင်. ရှိရှိ မရှိရှိ အမှန်က အမှန်အတိုင်းပဲ သမိုင်းမှာ တည်နေမှာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင်.ပဲ- လူ.ကပ်ပါး။ လူသတ်သမားတို.သည် ၈၈၈၈ ရုံခန်းအတွင်းကို နောက်ဖေးပေါက်က ၀င်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည်.သတင်းထောက်က ဒီအိမ်နောက်ဖေးမှာ ဈေးဆိုင်တည်မည်. သူတွေ အကြောင်း ရီရအာင်ဖွဲ.ဖွဲနွဲ.နွဲ. မပြော ၍ နဲနဲ အံ.အားသင်.မိသည်။
လူတွေအများကြီးသတ်ခဲ.သော အေဘီ ဥက္ကဌ ဟောင်းနိုင်အောင်က က ၈၈၈၈ ရုံ့းခန်းကို နောက်ဖေးပေါက်က တက်သည်။ အကြံပေး သောင်းထွန်းက ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက်ဆုတခုယူလာပြီး ပီအာလုပ်ပြသွားသည်။ ဦးကိုကို ကြီး၊ ကို မင်း ကို နိုင် တို.က သောင်းထွန်းး၊ နိုင်အောင်နဲ.အတူ မနေ.က ၈၈၈၈ ရုံ့းခန်းမှာ ညစာတူတူစားကြသည်ဟုကြားလိုက်ရသည်။ သူတို.ထိုင်သွားတဲ.နေရာကို နို.နဲ. တောင်ဆေးချင်တယ်လို. လူငယ်လေးတယောက်က သူ.ခံစားချက်တွေကို သူ.အီးမေးထဲမှာ ပြောသည်။ ၈၈၈၈ ရုံုး့ခန်းနောက်မှာ ခိုးချောင်ခိုးဝှက် ဈေးဆိုင်တည်မဲ. သူတွေမို. သူတို.က အကြိမ်ကြိမ်လာမှာ။ဒိတော. ခဏခဏ နို.တွေနဲ.ဆေးနေရမှာပေါ.လို. ခပ်ပေါ.ပေါ.ပဲ ပြန်ပြောလိုက်သည်။
ဤသို.ဖြင်. ကြောင်စုန်းကြီးများ သည် ၈၈၈၈အိမ်နောက်ဖေးက ၀င်ခဲ.သည်။ ပြီးတော. ခြေဖျားထောက်ပြီး သားကောင်ရှာသကဲ.သို. ညင်ညင်သာသာလေး ၀ပ်ဝပ်လေး ဂုတ်ရှိုး မျက်လုံးဒေါင်.ကပ်ကြည်.ပြီး ၀င်သွားကြတော. သည်။ (ကြောင်စုန်းကြီးတွေ အ၀င်ကျွမ်းလေ၍ ဟိုတယောက် ကိုမိုးသီးလိုလည်း အဆဲမခံရ။) ကံက ကောင်းလေတော. ကြောင်စုန်း နိုင်အောင် သောင်းထွန်းး တို. က မီဒီယာစက်ကွင်းမှာ လုံးဝ အဆဲမခံရပဲ၊ ၈၈၈၈ ထိပ်သီးတွေနဲ. ညစာတောင်တူတူ စားလိုက်ရသေးသည်။ အမေရိက က လာတာချင်းအတူတူ ဟိုအုပ်စု နဲ. တမူထူးကာ သူတို.က ရောင်းစရာအိုင်ဒီယာ တွေကို လူ မမြင်ရတဲ. အိတ်မဲကြီးထဲ ထည်. ယူလာပုံရသည်။ အမြတ်ထွက် နိုင်ငံရေး ဈေးကွက် အစီအစဉ်တွေကို ဒီိ ကြောင်စုန်း ၂ကောင်က အကွက်တွေ ဇယားတွေနဲ. ချပြရန်ရှိသည်။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို. သဘောကောင်းပုံကတော. စာဖွဲ.လောက်ပါသည်။ လူသတ်သမားတွေနဲ.တွဲထိုင်ရသည်။ သူတို.က နိုင်ငံခြားပြန်ဆရာကြီးတွေဆိုတော. ပွင်.လင်း အဖွဲ.အစည်းတွေအတွက် နိုင်ငံခြားက ငွေ ရမဲ. နေရာတွေကို သောင်းထွန်း နဲ. လူသတ်သမားနိုင်အောင်က ကြိုးကိုင်ပြီး ၈၈၈၈ ကို အကူအညီိပေးမယ်ဆို ပဲ။ ဤသို.ကြားနာလိုက်ရပါသည်။
အစိုးရထက်တောင်ကွက်ကျော်ရိုက်နိုင်၍ ဗူးတလုံးဆောင် အိုအောင်မဆင်းရဲ ၊အပြစ်မရှိချင်ယောင်ဆောင်နေ သော လူသတ်သမားနိုင်အောင်၊ အခါပေး ဦးပုံည သောင်းထွန်း၊ ကပ်ပါးဇော်ဦးတို. ရောင်းဝယ်မည်. ပစ္စည်းက အထူးအဆန်းမဟုတ်။ ပွဲဦးထွက် မားကက်တင်းန် marketing လုပ်သွားသော နေရာ၊နှင်. အချိန်ကိုက်မှု ကိုသာ နဲနဲ အံ.သြမိသည်။
ရခိုင်ကိစ္စ ဦးကိုကို ကြီး ဘယ်လို ပြောခဲ.တယ်ဆိုတာ မှတ်မိနေပါသေးသည်။ ရခိုင်အရေးမှာ ပြည်သူလူထု နှလုံးသည်းပွတ်ထိအောင်စိတ်ဆင်းရဲခဲ.ရ သည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ဦးကိုကို ကြီးက ပြည်သူလူထုအတွက် အားကြီးသောအသံတခုပေးခဲ.သည်။
ကိုမိုးသီး လာမဲ.နေမှာ စီ နီယာ ၈၈၈၈ များက ကြိုသင်. မကြိုသင်. အလွတ်ပြော ပြောကြရင်း အချင်းချင်း ဆွေးနွေး ကြသောအခါ ဦးကိုကိုကြီး၏စကားသံကအလွန်ပြတ်သားလှပါသည်။ ဦးမင်းဇေယျာကြီးက ကိုမိုးသီးကို ပုဂ္ဂိုလ် ရေး သံယောဇဉ်ဖြင်.သွား ကြိုရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး အလွတ်ပြော၊ ပြောခဲ.ဖူးသည်။ ဦးကိုကိုကြီး၏ပြတ်သားသောစကားတခွန်းကြောင်.ဘယ်သူမှ သွားမကြိုရဲကြ ။ (နိုင်အောင်.မှာ ပြည်တွင်းပရိသတ်မရှိ။ နိုင်အောင်ကို ကြိုသင်.မကြိုသင်. ဘယ်သူမှ စကားထဲ ထည်.ပြောစရာမလို။) ဒါပေမဲ. ဦး ကိုကိုကြီးပြတ်သားလိုက်ပုံများ၊ ကိုမိုးသီး သူငယ်ချင်းတောင် မချန်ထား၊ ဤသို.ဆိုခဲ.သည်။ မိုးသီး ထွက်သွားတုန်းက သူ.သဘောနဲ.သူ ငါတို. အားလုံးက ၀မ်းနည်းပေးခဲ.ရတယ်။ခု ပြန်လာပြန်တော.လည်းသူသဘောနဲ.သူ။ ဒီတော. သူ. အတွက် ငါတို.တွေ ၀ိုင်းပြီးဝမ်းသာပေးဖို. အချိန်မရှိဘူး---လို. ဆိုခဲ.သည်။ ဒီိလို ပြတ်သားခဲ.တဲ.ကိုကိုကြီး က serial killer စီရီရယ် ကေးလာ နိုင်အောင်၊သူ. အကြံပေးသောင်းထွန်းးတို.နဲ.ညစာတူတူ စားတာ ကြားရတော. နဲနဲ တော.အံ.သြမိပါသည်။
ပွင်.လင်း ရုံးထူထောင်ရေး အစမှာ နိုင်အောင်က သူ.မိန်းမကတဆင်. သိန်း၆၀၀ ကို ၈၈၈၈ တွေအားလှုသတဲ.။ ထိုပမာဏအတွက်တော.--ပြည်တွင်းက ၈၈၈၈ စိနီယာအုပ်စုသည် သူတို. ၊ မူကိုတော်ရုံနဲ.ပြောင်းရန်အကြောင်းမရှိ။ ပွင်.လင်းကာလဆိုတော. ပွင်.လင်း ရပေမဲ.၊ သူတို.ရပ်တည်နေရသောအနေအထား အရ ဘယ်လိုနည်းနဲ.မှ ၈၈၈၈ စိနီယာအုပ်စုသည် လာတွေ.သောသူတွေကို နှင်ချလို.မရ။ ထူးဆန်းတာက ကြောင် စုန်းကြီး ၂ကောင်က သူတို.ကြောင်စုန်းဆိုတာကို မေ.မေ.လျော.လျော.ဖြစ်နေသောသူတွေ ကြားမှာ They were havingagood time. ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည်။
ပရိတ်သတ်က နဲနဲ စိတ်ရှုတ်ထွေးနားမလည်နေတဲ. အချိန်မှာ ကြောင်စုန်းကြီး၂ကောင်က ပြုံးနေသည်။ ဥရောပ နှင်. အမေရိကန် အစိုးရစီက တရားဝင် ထောက်ပံ.ကူညီ ငွေတွေ အတွက် ဦးသောင်းထွန်းက တာဝန်ယူမည်။ နိုင်ငံတကာ က လာမဲ. အန်ဂျီအိုတွေ ဒေါက်တာ နိုင်အောင်က ဦးစီးမည်။ ဗဟုကတဆင်.နေပြည်တော်ကို ဇော်ဦး ပဉ္စမံ ခံတပ်ဖြင်. ၀င်စီးထားပီးသား။ ရန်ကုန်က ၈၈၈၈ စီနီယာကြီးတွေကို ရလျှင်ပွဲပြတ်ပြီ လို. အချင်းချင်း အီးမေးပို. ကြွားနေကြသည်။ ။ ၈၈၈၈ အချင်းချင်းကြားမှာတောင် ကို မိုးသီးကို အရူးဆိုပြီး ဇော်ဦးလို ကီးမာစတာက ဖြုတ်ထားပြီးသားဆိုပြီး၊ ၀င်.၀ါနေကြသည်။ အလွန်ညစ်ပတ်သော ခြေထိုးပွဲတွေ မစခင်မှာကို ဇော်ဦးက အချိန် မစိသေးပဲ ကြိုအောင်ပွဲခံချင်နေတဲ.အသွင်ဆောင်တဲ. အီးမေးတွေ က ၀င်နေသည်။ ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော. အသံတိတ်နေလေတော.၏။
(စိတ်ပူရန် စောလွန်းပါသေးသည်။ ဦးကိုကိုကြီး၊ ကိူ မင်းကို နိုင် ၂ယောက်လုံး ဒီ လောက် စိတ်ဓါတ်မပျော.-လောက်တန်ရာ၊ -သောင်းထွန်း နဲ. နိုင်အောင် ပြောချင်တဲ.သူက အတင်းကြီးပြောလေတော. နိုင်ငံတကာက အန်ဂျီအိုတွေခေါ်လာပေးမယ် ဆိုတဲ. စကားနဲ. ဘယ်လောက်ပဲ . ဝေေ၀ဆာဆောတွေ မက်လောက်အောင်ပြောနေသည်.တိုင်၊ ထိုင် နားထောင်နေရေးသည် အစားအစာပါသော ညစာ စကားဝိုင်း တွင် သိပ် ခက်ခဲလှတာမဟုတ်၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၏တို.ဆေးမှာ ၈၈၈၈ စီနီနိယာကြီးတွေက မတိုးနိုင်လောက်အောင် ဆေးပြီးပြီးသား ဟု စာရေးသူက တွက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါသည်။)
မီချောင်းကန်အပိုင်း ၁ နဲ.၂ မြေကွက်ကြီးမှာ လူစုံပြီ။
သင်ကန်းကျွန်းမိချောင်းကန် အပိုင်း ၁နဲ.၂ ရပ်ကွက်က မြေကွက်ကြီးကို ၁၉၉၁ ကတည်း က စစ်တပ်လည်းမဟုတ်။ စည်ပင်သာယာကလည်းမဟုတ်။ မီးရထားဌာနက သိမ်းထားတာ ခု ၂၁ နှစ် ရှိပြီဟုကြားသိရသည်။ အသိမ်းခံမြေကွက်ကြီးသည် ဟာလာဟင်းလင်း၊ ဒီမြေဆုံး၍ ဘ၀ပျက်ခဲ.သူတိုင်း ဒီမြေကွက်ကြီး နားမှာ ရင်ကွဲ ပက်လက်ဖြစ်ကြသည်။ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာစုန်းစုန်းမြှပ်နေသောဆင်းရဲသားတွေက ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုမိုးသီးတို. ကို သူတို. အဖြစ်တွေ ပြောပြလို၍ အသိမ်းခံ ငမိုးရိပ်မြေကွက်ကြီးနားစုရုံးရောက်လာကြသည်။ လူ ၃၀၀ ၄၀၀ လောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အားလုံးက သူတို.ကို မျှော်လင်.ကြသည်။ သူတို.မြေသူတို.ပြန်လိုချင်ပါတယ် လို. မျှော်လင်.တကြီးဝိုင်းပြောကြလေသည်။
ကိုမိုးသီးကတော.ထုံးစံအတိုင်း သူနဲ.ဘာမှလည်းမဆိုင်ပဲ၊ သူလည်းဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ပဲ ကတိတွေပေးပါတော.သည်။ နောက်တခေါက်ပြန်လာရင် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေး ကူညီိပေးပါ.မယ်လို. လူတွေကို နှစ်သိမ်. ကတိပေးခဲ.သည်ဟုကြားသည်။ မီးရထား ဌာနကသိမ်းတယ်ဆိုတော. သူ.ခမြာ ဦးအောင်မင်းကို ပြော ကြည်.ရင်ရမလားလို. အထင်နဲ. လွယ်လွယ်ကတိပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကို မင်း ကို နိုင်ကတော. ဆိတ်ဆိတ်သာ နေတော.သည်။ သူမျက်လုံးတွေက မြေကွက်ကြီးကို ငေးရင်း၊ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးကို ကျော်ကြည်.ရင်း၊ လူတွေကိုလည်း နားစွင်.နေရင်း၊ ပြုံးလို.သာနေတော.သည် ဟုနောက်ဆုံးကြားသိရပါသည်။
ကိုမိုးသီးကို စောလူးမင်း ဟု ပြောခဲ.ဖူးသည်။ သို.သော်သူသည် သူများသတ်လို.သေမဲ.သူတော.မဟုတ်။ အေဘီ မြောက်ပိုင်းစခန်းပြန်တွေ ကို အပါယ်ခံ အနှိမ်ခံ မျက်နှာမွဲတွေလို. ကျမ သိထားသည်။ ရေများရာမိုးမရွာ ရ ဆိုတာ လည်းကျင်.၀တ်တခုဖြစ်သည် ဟု ဆက် စဉ်းးစားသည်။ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.ဦး ကိုကိုကြီး၊ တို.သည်လည်း ကြောင်စုန်ကြီးများ အစားခံမည်.မွေးကင်းစ လှုပ်လိလှုပ်လှည်. ကြောင်ပေါက်သားငယ်လေးများမဟုတ်ကြ။ အဖြူနဲ.အမဲက တွဲလို.မဖြစ်နိုင်တဲ.အကြောင်း၊ စဉ်းစားသည်။ အိမ်နောက်ဖေးမှာဈေးဆိုင်တည် မည်.သူများ ဖြစ်သည်. ဒေါက်တာသောင်းထွန်း၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ ဇော်ဦး သူတို.စိတ်မှာတော. ငါတို.က လမ်း ဖေါက် ပြီးသားပဲ လို. တလွဲယုံကြည်နေပုံရှိသည်။ သူတို.ခမြာ အမှောင်မှာ ထိုင်နေကြသူများပေမို. လက်ဖျောက်ခြေဖျောက် လိပ်ပြာမရှိ မာန်မာနမရှိ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိ ၊ ဒါတွေအပေါ် မှာသာ ထိုင်ကျေနပ်နေသူများဖြစ်ခဲ.လျှင်ဆိုတဲ. အတွေးတွေ ဆက်ပေါ်လာတော.သည်။ ဒန်တေ၏အင်ဖာနို ကို နဲနဲ ပြန်မှတ်မိနေသေးသည်။ ----ဤလိုလူစားတွေ၏ယုံကြည်မှု အကြောင်းကိုသာ (စိတ်မသက်မသာမဖြစ်ပဲ) အကြောင်းအကျိုး သဘောအရ အနည်းငယ် စဉ်းစားဖြစ်သည်။ သူတို. လျောက်သော လမ်းကျဉ်း ၏ လွတ်လပ်မှုပမာဏကိုသာ အလွတ်တွေး တွေးနေတော.သည်။ သစ္စာ သမားတွေ ကို တနည်းနည်းဖြင်. တရားစောင်.သောနတ်တွေက ကူညီလိမ်.မည် ဟု သေချာပေါက်ယုံ၏။ .
US and one of them ( Dr. Thaung Tun, mentor of Naing Aung and Zaw Oo.